Ụlọ ọrụ Mccb | Ndị na -emepụta China Mccb na ndị na -ebubata ya
JVM1LE (CM1LE) Onye Kpụrụ Ihe Ntụgharị Circuit
VM1LE (CM1LE) Kpụrụ Ihe Mgbapụta Circuit
JVM1LE usoro kpụrụ ihe sekit sekit na mmepụta ihe dị ugbu a. Mkpuchi mkpuchi
voltaji bụ 800 V. Ọ na -emetụta okirikiri nke AC 50Hz, voltaji na -arụ ọrụ 400V yana ọkwa nke na -arụ ọrụ ugbu a ruo 630V, maka ịgbanye ugboro ugboro na mmalite nke moto. Site na oke ibu, obere okirikiri na mmepụta voltaji, ọ nwere ike chekwaa okirikiri na akụrụngwa na-enye ọkụ site na mmebi, enwere ike iji ya maka mmepụta site na mmebi yana ihe ọghọm ọ bụla nwere ike bute site na ntụpọ ụwa dị ogologo oge nke enweghị ike ịchọpụta ya. mmepụta ugbu a. Uru nke ihe fọdụrụ ugbu a bụ nhọrọ.
Ọrụ nke fuuz bụ ichekwa ugbu a. A na -eji fuuz agbaze na ọkpọkọ fuse, nke ejikọtara n'usoro dịka onye na -eduzi igwe na sekit. Mgbe ihe dị ugbu a karịrị uru ụfọdụ, fuuz ga -ewepụta okpomọkụ iji gbazee agbaze, si otú a na -akụghasị ihe dị ugbu a ma nweta mmetụta nchebe. A na -eji fuse n'ọtụtụ ngwa eletriki na eletriki n'ihi usoro ha dị mfe na iji ya eme ihe.
Usoro JVA5 nwere obere sekit dị mkpụmkpụ yana ọrụ nchekwa karịrị akarị, ọ dabara maka sistemụ nkesa ike n'ụlọ nrụpụta, azụmaahịa na ụlọ obibi, yana na -echebe akụrụngwa ike dabara. Ụdị ihe eji arụ ọrụ nwere uru nke ike mgbaji siri ike, nnukwu ikike, mmetụta dị elu, ntụkwasị obi dị mma, ndụ ogologo oge, nnọchi dị mma, wdg dabara adaba maka AC 50/60Hz, otu-usoro 230V, na mpaghara atọ ma ọ bụ waya anọ. 440V sekit karịrị akarị na nchedo mkpirikpi. N'otu oge ahụ, a na -ejikwa ha maka ịgbanwuo ọkụ n'okpuru ọnọdụ nkịtị. Emebere ngwaahịa a ma mepụta ya dịka ụkpụrụ IEC 60898 na IEC 60947 si dị.